रिसका कारण, प्रभाव र नियन्त्रणका उपाय ! - Laltin Media
Home»लाईफस्टाइल»रिसका कारण, प्रभाव र नियन्त्रणका उपाय !
रिसका कारण, प्रभाव र नियन्त्रणका उपाय !
By लाल्टिन डट कम July 1, 2022 No Comments4 Mins Read
भनिन्छ रिस मानिसको शत्रु हो ! रिसैले सब नासिने, रिसैले उठ्छ झगडा, रिसैले सब भासिने । त्यसैले मानिसले रिसलाई नियन्त्रण गर्नु नै बुद्धिमानी मानिन्छ । रिस ज्यादै शक्तिशाली भाव हो । रिसाएका बेलामा आफूलाई नियन्त्रण गर्न निकै कठिन हुन्छ । रिसको झोंकमा धेरै कुटपिट, हिंसा र हत्या हुने गरेका छन् ।
कहिलेकाहीं त कसरी यति धेरै ठूलो घटना भयो भन्ने पनि रिसाएको मानिसलाई थाहा हुँदैन । रिसकै कारण घरमा कुटपिटका घटना हुन्छन् र कहिलेकाहिँ सिकिस्त हुने गरी कुटपिट गर्ने, मट्टीतेल खन्याएर आगो लगाउने र कसैको ज्यानसमेत लिने प्रयास भइरहेको हुन्छ । त्यस्तै गरेर परिवारमा कलह, झगडा, अनमेल, पारपाचुके र केटाकेटीमा ज्यादै नकारात्मक भाव उत्पन्न हुने प्रमुख कारण पनि रिसाउने, झगडा गर्ने र कुटपिट गर्ने बानी नै हो ।
रिस मानिसको स्वाभाविक प्रक्रिया हो तर यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ठूलो झमेलामा फस्ने डर हुन्छ । हामीले आफ्नो रिस नियन्त्रण गर्नु आवश्यक हुन्छ । रिसको झोंकमा गरिने हरेक कामले हामीलाई झनै धेरै समस्या निम्त्याउँछ । त्यसैले सकेसम्म रिस नियन्त्रण गर्नु राम्रो हुन्छ ।
रिस कसलाई पो उठ्दैन र ? तर त्यो कति बेर रहन्छ वा त्यसको परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने झन् संवेदनशिल पक्ष हो। धेरै थोरै रिस सबैमा हुन्छ। रिसले शारिरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा स्वास्थ्यमा समेत नराम्रोसँग प्रभाव पार्छ। बारम्बार रिसाउँदा नजिकको वा माया गर्ने मान्छेसँगको सम्बन्धमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्छ। रिसले व्यावसायिक जीवनमा नै आँच आउँछ। यदि तपाईलाई रिस नियन्त्रण गर्न गा–हो भइरहेको छ भने तल उल्लेखित केही टिप्स पालना गर्न सक्नुहुन्छ :
१. जब तपाईंलाई निकै रिस उठ्छ । तब १० अंक देखि १ अंकसम्म उल्टोबाट गन्नुहोस । विस्तारै गन्नुहोस् । यसो गर्दा तपाइँको दिमाग गणनामा केन्द्रित हुन्छ र तपाइँले त्यो विषय भुल्नुहुन्छ जसले तपाइँलाई रिस उठाएको छ ।
२. तपाईंलाई जे-जसका कारण पनि रिस उठेको हुनसक्छ । चाहे घरपरिवारका मान्छे, साथीसँगी तथा अन्य व्यक्तिसँग रिस उठेको किन नहोस् तपाईं रिस उठेका मान्छेको नजिक नबस्नुहोस् र उठेर कतै टहल्नका लागि हिँडिहाल्नुहोस् ।
६. अरुको गल्तीलाई माफ गर्न सिक्नुहोस् । कहिलेकाहीँ तपाइँको चित्त दुखाउने मानिसलाई माफी दिनसक्नु तपाइँको महानता हुन्छ । यसले तपाइँलाई मानसिक शान्ति प्रदान गर्छ र रिसको कारकतत्व पनि साम्य हुन्छ ।
८. रिससँग सामना गर्ने विभिन्न उपायहरू जस्तै : आरामका अभ्यासहरू, प्रकृतिसँग आनन्द मिल्ने ठाउँहरूमा चाडबाड, पूजापाठ, मन्दिर, सांस्कृतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुने ।
९. खुसी, रमाइलो गरेको क्षणहरूलाई सम्झिने ।
१०. कुनै-कुनै बेला आफ्नो भूल, गल्ती, कमी कमजोरीलाई आफैंले क्षमा दिन सिक्नुस् ।
११. आफू तथा अरूलाई होच्याउने वा ठेस पुर्याउने खालको बोली वचनको पहिचान गरी त्यसमा सुधार ल्याउनुहोस् ।
१२. रिस उठ्ने तत्त्वहरू के-के छन् आदि कुराको पहिचान गरिसक्नुभएको छ भने भरसक आफूलाई त्यसबाट टाढा राख्नुस् ।
१३. परिवार तथा आफ्नो मन मिल्ने साथीसँग मनमा लुकेका रिसका भावनाहरूलाई उसको सामुन्ने पोख्नुस् अर्थात् साझेदारी गर्नुस् ।
प्राय: मानिसले अरुलाई मात्र दोषी देख्छन् र आफ्नो कमजोर हेर्दैनन्। झगडा वा रिस उठ्नका कारणलाई रचनात्मक तरिकाले विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यसमा आफ्नो पनि दोष हुनसक्छ। आफ्नो दोष छ भने माफ माग्दा प्रतिष्ठा बढ्छ। यसले सम्बन्धलाई सकारात्कम बाटोमा डोर्याउँछ । रिस नियन्त्रण गर्नु अभ्यासको विषय हो। त्यही भएर यो प्रक्रियालाई धैर्यतापूर्वक अभ्यास गर्नुपर्छ ।